Izinkinga zamadoda embhedeni
Abantu abaningi bazi ukuthi umuntu wesifazane kuphela othunda kaningi kwi round eyodwa yocansi, kanti cha nabantu besilisa bayakwazi ukuchama kaningi kwi round eyodwa, indlela yokwenza lokho ukuchama kodwa uketshezi ungalukhiphi kwinduku yakho, kuzwakala kuyinganekwane lokhu, kodwa kuyenzeka. Ukuchama kuyakhathaza, ikakhulukazi uma uzochama ama round amaningi ukhathala ube wudaka, kodwa uma upractiser lokho okubizwa ngokuthi yi "semen retention" okusho ukuthi uzochama kodwa ungayikhiphi imbewu yakho, lembewu ebeyizophuma etotozini ngeke iphume izobuyela emzimbeni, uzozizwa usunamandla amakhulu emva kwalokho, netotozi futhi ngeke iwe.
Imbewu yomuntu wesilisa igcwele proteins, nutrients, minerals and enzymes. Kuthiwa ukuchama ikona nokwakhiwa kwama spermi ikona okwenza abantu besilisa basheshe bashone kunabesifazane, futhi kuthiwa umuntu wesilisa ochama njalo akabukeki enempilo, uhlale ekhathele, engenamandla, enolaka, ene-strees lokhu kungenzeka kungabi yiqiniso kodwa kuthiwa lapho kukhona intuthu nomlilo ukhona.
Uma uzimisele ngokufunda i-full body orgasm, kungakuhle ubheke izincwadi ze Tantra online, kwi tantra inhloso kusuke kungeyona ukuchamisa umuntu wakho, kodwa kusuke kuwuku connector nomuntu wakho, usebenzisa ucansi. Ucansi luyi energy i-tantra izokufundisa ukuthi ukwazi kanjan, ukususa leyo energy kwinduku noma kwinkomo yakho, uyihambise umzimba wonke, ngaleyondlela, uzokwazi ukuchama kodwa uhambise i-energy emzimbeni, ku-vibrate umzimba, kodwa kungachameka, kuzwakala kuyinganekwane kodwa kuyenzeka. Uma wenza ucansi kubamnandi enkomeni nasetotozini, yingoba i-focus yakho isuke isesithweni sangasese, uma ususa i-focus khona uyibeke emzimbeni wakho wonke uzozwa umzimba u-vabrator kamnandi, uzwe ubumnandi ongakaze ubuzwe kodwa ube ungachami ngesitho sakho sangasese.
Ukwenza ucansi nge tantra umqondo kumele uhlanzeke, ungacabangi okungekho kwi bedroom, uzodinga ukuthatha i-enegy esethweni sangasese uyinyuse iye emzimbeni, ngokuthi u-visualiser energy as a ball elisuka esithweni sangasese, linyuke ngaphakathi lize lifike ekhanda. Ukuchama kuyi process, uma usukwazi ukuzwa a point of no return uzozwa masekuseduze ukuchama, bese uthatha energy yakho uyiyisa emzimbeni, ngeke uze ukhiphe lukho endukwini yakho uma wenza kanjalo. I-tantra ke iyincwadi enkulu ngokwayo ukuze ube nolwazi olubhelele, lwe-trainingi, ngizoshiya amawebsites azokufundisa kancono kanye nezincwadi.
Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084/ 352/ 2187/
© Copyright 2019, mnelisi.com